Kwehle izihlathi kuhoxiswa ukwakhiwa kwe-mall eMpendle – Sivubela intuthuko Newspaper
Kwehle izihlathi kuhoxiswa ukwakhiwa kwe-mall eMpendle
UMNU Sizwe Ndlela iMeya kuMasipala waseMpendle. ISITHOMBE NGU: TSEPO MOLEEFE
ISIBALO esiphansi sabantu abangasebenzi eMpendle siphoqe ukuhoxiswa kohlelo lokwakhiwa kwenxanxathela yezitolo kuleya ndawo kulandela ucwaningo oluveze ukuthi bancane kakhulu abantu abavukayo ukuya emsebenzini. Abanikazi bezitolo ezinkulu ezaziwayo abebefuna ukutshala izimali zabo kuthiwa babone kuzothatha isikhathi ukubuyisela imali lapho abebezobe beyiboleke khona ingasaphathwa eyenzuzo abebezoyenza.
Lezi zindaba ezingehlanga kahle eMkhandlwini kaMasipala waseMpendle zivezwe yimeya yakulomasipala uMnu Sizwe Ndlela obechaza ngohlelo lwentuthuko edidiyelwe yohlahlo mali lonyaka ka-2020 no-2021 oluqale ukusebenza ngoJune nonyaka luphele ngoJuly ngonyaka ozayo.
Umasipala waseMpendle uhlinzeke imali enguR67835000 okungeyokuhanjiswa kwentuthuko kubantu bakuleya ndawo. Iphawula ngokuhoxiswa kwenxanxathela yezitolo imeya ithe: “Kusiphathe kabi ukuhoxa kwezitolo ezinkulu ebesixoxe nazo ngohlelo lokwakhiwa kwenxanxathela yezitolo ngenxa yesibalo esiphansi sabantu abasebenzayo eMpendle. Singumasipala omncane ongazenzeli inzuzo kodwa lokho okuncane esinakho sikwabela kahle abantu. Ngenyanga ezayo uNtulikazi sizobe sivula ngokusemthethweni isikhungo sezokuvakasha esithemba ukuthi izivakashi zizofunda kabanzi ngendawo yethu. Lesi sikhungo sihlele ukuba sibe eBoston emgaqweni uR617 phakathi kweHowick naseBulwer lapho kuhamba khona kakhulu izivakashi.”
Imeya ibe seyiphonsela inselelo kubantu abazitamuzela emhlabeni kamasipala okulendawo abaye bazibeke bakhe imizi yabo kuwona. “Singumasipala sinqume ukuthi labo bantu abavele sebakhile emhlabeni kamasipala singabe sisabaphazamisa. Sizophoqeleka ukuthatha izinyathelo ezinqala uma sibona noma ngubani eqala ukwakha manje. Indaba yomhlaba waseMpendle ijule kakhulu ngakho ngeke sande kakhulu ngayo njengoba sekuwudaba olusezithebeni zenkantolo,” kusho imeya uMnu Ndlela.
UMnu Nelisani Ngubane we-IFP okuyiqembu eliphikisayo eMpendle ukuhlabile ukuhoxiswa kwezitolo ethi umkhuba usekhaya ebuhuholini bakwamasipala. “Kubuhlungu ukuzwa ukuthi izitolo zihoxisiwe ngoba abantu bengasebenzi. Umbuzo uthi yiluphi uhlelo oluza nomasipala ukulekelela abantu abangasebenzi,” ubuze kanje.
BACELA UXHASO ABASHELWA INDLU
UMasipala weTheku nohlelo lokuthuthukisa indawo
Abaphila ngobulile obubodwa bahlabe ukuncwasa umphakathi
UZikalala weseka umsebenzi wabeKZN Climate Change and Sustainable Development Council
UMKHANDLU WETHEKU NOHLELO LOKUXHUMANA NOMPHAKATHI NGEZINHLELO ZAWO
Amaqembu aseKZN ethubeni lokuqopha umlando